ရောင်စုံလေးပွင့်အောင် စက္ကူပန်း ကိုင်းကူးနည်း
ဈေးကွက်ဝင်၅သောင်းမှ ၂သိန်းခွဲဝန်းကျင်​ရရှိနိုင်သော စက္ကူပန်းတစ်ပင်မှရောင်စုံပွင့်စေသည့် ကိုင်းကူးကိုင်းဆက်နည်း လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ကပ်​ကြေးထက်ထက်တစ်လက်​ ဘရိတ်ဓားတစ်ချောင်း ရေစိုခံတိတ်​အကြည်တစ်ခွေ ရှင်သန်နေသောစက္ကူပင်မတစ်ပင်တစ်အိုး(Main အပင်​) ကူးချင်သည့်အရောင်ပါသည့်ကိုင်းရင့်ကို ၂​ပေ​လောက်​ဖြတ်​ပါ ဖြတ်ထားသည့်ကိုင်းအပင်မှ အရွက်​များညပ်ထုတ်ပါ ရင့်သောအရင်းနေရာမှအရိုးအား ဘလိတ်​ဓားဖြင့်​ ခြစ်​ထုတ်​ပါ အတွင်းသားအစိမ်းရောင် အကြောနားရောက်သည်အထိခြစ်​ပါ အရောင်စုံပွင့်စေလိုသည့်​Main အပင်​မကြီး၏ မိမိကူးလို​သောအကိုင်း​နေရာမှ အရိုးကိုအလယ်မှ ဓားဖြင့်​ခွဲပါ အဆစ်ထိရောက်အောင်ခွဲပါ။ […]
အပင်များအတွက် ရောဂါကာကွယ်ဆေး နှင့် အာဟာရ အမြန်စုပ်နိုင်တဲ့ မြေသြဇာရည် ကိုယ်တိုင်လုပ်နည်း
February 14, 2020 Latest Myanmar News 0
အပင်အတွက် အာဟာရ အမြန်စုပ်နိုင်တဲ့ မြေသြဇာရည် ဖျော်နည်း လက်တစ်ကမ်းမှာ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါ။ အချို့ကို ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ ရပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက ၁။မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါလက်ဖက်စားဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ၂။အမိုးနီးယားရည်လက်ဖက်စားဇွန်းတစ်ဇွန်း(နိုက်ထရိုဂျင်အတွက်) (အီကြာကွေး လုပ်ရင်သုံးကြတယ်)၊ ၃။ရေခဲနဲ့သောက်တဲ့ တီးမစ်(iced tea)က လက်ဖက် စားဇွန်း သုံးဇွန်း(သူ့မှာပါတဲ့ tannic အက်ဆစ်က […]
February 8, 2020 Latest Myanmar News 0
ကောက်ရိုးမှိုကို ရုံဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်း ၁. ရံ တည်ဆောက်ခြင်း အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးဖြင့်တည်ဆောက် ကြသော်လည်း ကျနော်အကြိုက်ဆုံး အကျယ်အဝန်းမှာ အလျား ၁၂ ပေ အနံ ၈ ပေ အမြင့်ခေါင် မြေပေါ် ၉ ပေ လက်ခံ မြေပေါ် ၇ ပေ ဖြစ်ပါတယ် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် […]
ကာလ အတော်ကြာ အသုံးပြုပြီးမြေများအတွက် ဆားကို မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြုပုံ
ဆားခါးကို မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း ဆားခါး၏ ဓာတုဗေဒ အမည်မှာ မဂ္ဂနီဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ် Magnesium Sulphate MgSo4 7H2O ဖြစ်သည်။ ဆားခါးကို ၀မ်းနှုတ်ဆေး တစ်မျိုးအဖြစ် အသုံးပြုကြသော်လည်း မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြုရန် သတိမထားမိကြပေ။ ဆားခါးတွင် အပင်များအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ဒြပ်စင်နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် […]
အစေ့မပါတဲ့ လိုင်ချီးသီး ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ နှစ်ပေါင်း၂၀ ကြိုးစားခဲ့သူ
January 13, 2020 Latest Myanmar News 0
လိုင်ချီးသီးတွေဟာ အရည်ရွှမ်းပြီး ချိုမြတဲ့ အရသာကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အင်မတန် လူကြိုက်များလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ ကြီးမားတဲ့ အစေ့ပါဝင်နေတာကြောင့် rady made စည်သွပ်ဘူးတွေ၊ အချိုရည်တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ အစေ့ကိုဖယ်ပြီးမှ ထုတ်လုပ်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သာ လိုင်ချီးသီးမှာ အစေ့မပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲ ? အခွံလေးရွှတ်ခနဲခွာပြီး ပလွတ်ခနဲ […]
မြေမကောင်းတဲ့ မြေမှာ မြေရွေးတဲ့အပင်ဖြစ်ထွန်းအောင်စိုက်ပျိုးနည်း
January 11, 2020 Latest Myanmar News 0
မြေ​ရွေးတဲ့ အပင်​အမျိုးအစားမဆို စိုက်​လို့ရအောင်လုပ်နည်း မြေအမျိုးအစား​ရွေးလို့ မိမိစိုက်​ပျိုးချင်​တဲ့ အပင်စိုက်​မရဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး.။ မြေအမျိုးအစား​ရွေးတဲ့ အပင်တွေစိုက်​မရလို့ မစိုက်​ရတဲ့ ပြသနာကို နည်းစနစ်​ပိုင်း နဲ့ ​ဖြေရှင်းလို့ရ​ပါတယ် မြေချဉ်​ မြေငန်​ရွေးစရာမလိုပါ။ အပင်​မကြိုက်​တဲ့ ​မြေအမျိုးအစားမှာ​မြေချမစိုက်​ပဲ သူကြိုက်​တဲ့ ​မြေအမျိုးအစားကိုလဲ ကိုက လိုက်​ရှာစိုက်ဖို့မလိုပါဘူး။ အပင်​တိုင်းမှာ တူညီတဲ့ အချက်​တခုရှိတယ်​ […]
နှမ်းရိုးကို အလွယ်မီးရှို့မပစ်ပါနဲ့( တောင်သူများအတွက် မှတ်သားဖွယ်)
December 31, 2019 Latest Myanmar News 0
နှမ်းရိုးကုိ မီးမရှို့ ပါနဲ့ အကျိုးရှိရှိ် သုံးပါ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘက်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ လမ်းခရီးတစ်နေရာမှာ ရောက်တော့ လယ်ကွင်းထဲမှာ နှမ်းရိုးတွေကို မီးရှို့ နေတာကို တွေ့ရတယ်။ စိုိက်ပျိုးရေးသမားပီပီ မနေနိုင်တော့ ကားကို ရပ်လိုက်ပြီး မီးရှိုိ့တဲ့နေရာအရောက် သွားကြည့်မိပါတယ်။ မီးရှို့ နေတဲ့ လယ်သမားကြီးကို ဘာကြောင့် မီးရှို […]
အသီးတံမှ ၀ဥအပင်ပေါက်လေးဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်နည်း
December 23, 2019 Latest Myanmar News 0
ဝဥဖူးတံမှအသီးကိုဘယ်အချိန်မှာစိုက်ရမည်နည်း ထိုမေးခွန်းကိုမိမိ၏ ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းတွင်မေးကြ၏ ဝဥဖူးတန်သည် ဒေသအလိုက် မုတ်သုန်လေအဝင်ပေါ်မူတည်၍ မေလမှဂျွန်လအတွင်းတွင်ဖူးတန်စထွက်ပြီး နိုဝင်ဘါလ ဒီဇင်ဘါလများတွင် ရင့်မှည့်သည် ထိုဖူးတန်များကို ရင့်ညိုလာသောအခါ အပေါက်ဖေါက်ထားသောပလက်စတစ်အိပ်ဖြင့်စွပ်ပါ စွပ်ပေးသောအိပ်ထဲသိုရင့်မှည့်၍ ကြွေကျလာသော အသီးစေ့များကိုစိုက်၍ရပါပြီ ထိုဖူးတန်သီးများ၏ ထူးခြားမှုမှာ ကြွေကျလာသောအသီးကို အရိပ်အေါက်ရှိ ပျိုးခုန်တွင်တန်းစိုက်ပါက အပင်လေးပင်မှခုနှစ်ပင်ထွက်ပြီး ခြောက်သွေ့ပိန်ကပ်နေသောအခြေအနေမှစိုက်လျှင် တစ်ပင်သာပေါက်ပါသည် ဖူးတန်အမှည့်ကိုတန်းစိုက်မည်ဆိုလျှင် […]
December 21, 2019 Latest Myanmar News 0
ပန်းများပွင့်စေလိုလျှင် ကိုယ်တိုင်လုပ် ပန်းပွင့်ဆေးပန်းများပွင့်စေဖို့ အိမ်သုံးဆေးများ အပင်မသန်ရင်နေ ပန်းတွေပွင့်နေရင်ကို ပျော်နေပါပြီဆိုတဲ့ ပန်းချစ်သူတို့အတွက် ပန်းပွင့်စေတဲ့အားဆေးတွေ ပြောပြချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပန်းဆိုပေမယ့် ဓါတ်သဘောအရ အသီးနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလျင်းသင့်သလို ချဲ့ပြီး သုံးကြပါခင်ဗျ။ ( ၁ ) ကြက်ဥခွံ ဒါကတော့ ကျွန်တော်အမြဲပြောနေကျမို့ […]
သရက်ပင်ရှိသော နောင်တော်တို့အတွက် ရာသီချိန်မှာ ထွက်နှုန်းကောင်းအောင် ဂရုစိုက်နည်း
December 18, 2019 Latest Myanmar News 0
ယခုအချိန် “သရက်”စိုက်သူများ အရေးကြီးသောအချိန်ဖြစ်လာပါပြီ – သရက်ခြံများတွင် ပန်ဖူးများ သရက်ပန်းများ အပြိုင် ထွက်လာတော့မည့်အချိန်ကာလပါ ဒါကြောင့်မို့ “လိုအပ်သောအချိန်” “လိုအပ်သောအကြောင်းအရာ”များက “လိုအပ်သောသူ”အတွက် အကျိုး ရှိစေမှာပါ။ သရက်”ပန်းပွင့်ချိန်”တွင် ပြုစု ဂရုစိုက်ခြင်း (က) ပန်းပွင့် အစပြုသည်အချိန် ( ခ) ပန်းပွင့်ချိန် (ဂ […]
ပိုက်ဆံအိတ် အရောင် ၏ အကျိုးအပြစ် အယူအဆ